Macalin u geeriyooday kaniin xanuun baa’biye ah oo uu laqay kadib – The Voice of Northeastern Kenya
Macalin u geeriyooday kaniin xanuun baa’biye ah oo uu laqay kadib
Star FM October 22, 2016
Wararka ka imaanaya Maamul goboledka kitui ayaa sheegayaa in ardayda iyo macalimiinta schoolka sare ee Kitui ay u boroo diiqayaan maamulhooda kadib markii uu laqay daawo xanuun baabiye ah kadibna uu u geeriyooday.
Mr John Mwangi ayaa la sheegay in uu marki hore indha beelay ka hor inta uu geeriyoonin wax yar un kadib markii uu cunay kaninkaasi oo uu kasoo gatay xarun lagu iibiyo daawoyin.
Sida laga soo xigtay xaskiisa oo lagu magacaabo Pauline Mwangi, macalinka ay xiligii uu daawada kasoo ibsanayay Magaalada Ruiru ayaa waxaa la sheegay in uu ka yimid aas uu ooga qeyb galay Nyahururu.
Waxay intaa kudartay in markii hore si aad ah indhaha looga qabtay taaso caadadiis eheyn balse markii la geeyay isbitalka kitui balse dhaqaatirta ayaa waxba ka qaban waayay taaso horseeday in lasoo qaado Magaalada tan Nairobi.
Qoyska macalinkan ayaa hadda aaminsan in Mr la siiyay daawo aan eheyn mida uu dalbaday sidaas awgeedna au wax u dhintay wallow ilaa iyo hadda aysan jirin warbixin kasoo baxday howlwadeenada caafimadka.
Waxaa ilaa iyo hadda si rasmi ah loo ogeyn sababta dhabta ah ee gewerida maamulahaasi balse dhaqaatirta ayaa bilaabay baaritaano qoto dheer oo lagu ogaanayo arintas.
Tani ayaa ku soo aadeysa xili la sheegay in xarunta uu kasoo gatay daawada lagu eedeynayay in ay shacabka ka iibinayeen daawooyin falso ah kuwaas oo waxyeelo garsiineyso dadka xaruntaasi ka ibsanaya dawooyinka loosoo qoray.
Waxaa dhanka kale loogu baaqay shacabka in ay si aad ah ooga firsadaan goobaha iyo xarumaha ay ka ibsanayaan waxyaabaha ay doonayaan gaar ahaan daawooyinka.
← Xildhibaanka degmada Ugunja oo ku goodiyay in uu aqalka barlamaanka horgeyn doono mooshin ka dhan ah Matiangi
Madaxa Cadaalada dalka oo sheegay in meesha uu musuqmaasuqa kajiro uu yahay maxkamadaha dalka →